လိင်ကွဲလိင်ခြားသူဆွီဒင်နှင့်အီတလီတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများ (၂၀၁၅) - Your Brain On Porn
Volume ကို 24, Issue 4အောက်တိုဘာလ-ဒီဇင်ဘာလ 2015, စာမျက်နှာများ e84-e93
အက်ဖ် Tripodia, ,အက်စ် Eleuterib, ,အမ် Giulianic, R. ရော့စီa, အက်စ် Livib, ဗြဲ Petruccellid, အက်ဖ် Petruccellie, K. Danebackf, C. Simonellib
ယခင်လေ့လာမှုများအင်တာနက်ကိုနည်းနည်းအရှက်နှင့်မကြာခဏပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံရေးထင်ယောင်ထင်မှားနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောပုံမှန်မဟုတ်သောအလိုဆန္ဒများကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေကိုရှင်းပြပါ။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းလိင်နှင့်အင်တာနက်အကြားနှစ်ဆ link ကိုအပေါ်ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်စာပမြေားနေသော်လည်းအထူးသပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အွန်လိုင်းခေါ်ဆောင်သွားလှုံ့ဆော်မှုရဲ့ contents ခွဲခြားစိတ်ဖြာအတော်လေးအနည်းငယ်လေ့လာမှုများရှိပါသည်။
ဤပြဿနာနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည့်အခါလက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်အသုံးဝင်သောဖြစ်နိုင်ကြောင်းလက်တွေ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားကမ်းလှမ်းရန်ရည်ရွယ်, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့အီတလီနှင့်ဆွီဒင်အတွက်စုဆောင်းငယ်ရွယ်လူကြီးများအားဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအတွက်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကျား, မကွဲပြားမှုဆန်းစစ်ရန်။
စစ်တမ်းကိုအီတလီနှင့်ဆွီဒင်လိင်ကွဲလိင်ကျောင်းသား ၈၄၇ ဦး နှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအင်တာနက်လိင်စိစစ်ခြင်းစမ်းသပ်ခြင်း၊ လိင်စွဲလမ်းမှုစစ်ဆေးခြင်း - အတိုကောက်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်စိတ်စိတ်ဝင်စားမှုမေးခွန်းလွှာများအပါအ ၀ င်အတိုင်းအတာများစွာကိုပြီးစီးခဲ့သည်။
အမြိုးသမီးမြားကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားအားဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားအပေါ်လုပ်ခဲ့တယ်ထက်ယောက်ျားပိုမိုမြင့်မားသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ကျား, မများ၏အခြေအနေအရအကျိုးသက်ရောက်မှုကစာရင်းအင်းသိသာပေမဲ့ (P <0.05) တူညီသောမြင်ကွင်းများအတွက်နှစ် ဦး စလုံးအမျိုးသားရေးအခင်းအကျင်းအတွက်, ယောက်ျားမိန်းမတို့အကြားကွဲပြားခြားနားမှုဆွီဒင်ထက်အီတလီအီတလီ၌သာ။ ကြီးမြတ်ရှိကြ၏။ ဆွီဒင်အမျိုးသမီးများသည်အီတလီအမျိုးသမီးများထက်လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပိုမိုသိလို။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်နှင့်မတူပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအချို့ပုံမှန်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားများပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၏ "Normal" အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့် Clinician ကူညီနိုင်ဘူး။ အဆိုပါ Clinician အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်တိကျတဲ့အသိပညာရှိသည်သောအလွန်အရေးကြီးသောဒါဟာဖြစ်၏ မဟုတ်ရင်သူတို့ပုံစံနှင့်ချမှတ်ခြင်းစီရငျခကျြမှအားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းရူပါရုံကိုမြင်ညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများနှင့်ဝမ်းနည်းကြေစိတ်လှုပ်ရှားရဲ့ contents အဆိုပါ psychosexual အကြံပေးခြင်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်အကြောင်းအရာများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့် / သို့မဟုတ် cybersexual ပြဿနာအပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေညွှန်းကိန်းအဖြစ်, တကယ်တော့, စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
" အွန်လိုင်းပေါ်တွင်တွေ့ရသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်လိင်ဆိုင်ရာအယူအဆအပေါ်ပုံမှန်ပြုမူခြင်းနှင့်ခိုင်လုံသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေနိုင်သည် (Berger et al ။ , 2005), ထိုကဲ့သို့သောခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သောစိတ်ကူးယဉ်မှုများအတွက် Galilreathet al ။ , 2002 နှင့်ယခင်ကရှိခဲ့ဖူးသောသူများအကြားပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဦး စားပေးမှုများနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုအသစ်များရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဘာသာရပ်အချို့ကို ဦး ဆောင်သည်။
"အင်တာနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသည်ဆေးခန်းပြproblemနာဖြစ်လာခဲ့လျှင်ဆန်းစစ်ရန်ဖြစ်သည် အင်တာနက်ကိုလိင်စစ်ဆေးခြင်းစမ်းသပ် (ISST), 25- စစ်မှန်တဲ့ - မှားယွင်းသောကို item စမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ISST ၏စုစုပေါင်းရမှတ်များသည်ဘာသာရပ်များကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ အန္တရာယ်နိမ့်ကျမှု (၁-၈)၊ စွန့်စားမှု (၉-၁၈) နှင့်မြင့်မားသောအန္တရာယ် (> ၁၉) ။ [အကြောင်းအရာများပျမ်းမျှဘာသာရပ်များ (M) 5. +, (F) 2.0] …” ISST နှင့်စပ်လျဉ်း (ဆွီဒင်နိုင်ငံသား၏ 91.4% vs အီတလီ၏ 88.7%) သင်တန်းသားများကိုအများစုသည် '' အနိမ့်အန္တရာယ် '' အမျိုးအစားပိုင်ကျန်ရှိနေသေးသော တဦးတည်းအီတလီနှင့်တစ်ဆွီဒင်အထီးဘာသာရပ်များ '' မြင့်သောအန္တရာယ်မှာ '' စဉ်ဘာသာရပ်များ၏ရာခိုင်နှုန်း, '' အန္တရာယ်မှာ '' (ဆွီဒင်နိုင်ငံသား၏ 8.3% vs အီတလီ၏ 11%) အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်, အီတလီနှင့်ဆွီဒင်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိ။
"SAST-A နဲ့ပတ်သက်ပြီးအီတလီလူမျိုးတွေနဲ့ဆွီဒင်နိုင်ငံသားတွေအကြားကွဲပြားခြားနားမှုမရှိဘူး။ ဘာသာရပ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာစုစုပေါင်းရမှတ် ၂ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်မှုနိမ့်ကျနေတယ်) ရတယ်။ အမျိုးသားအုပ်စုသည်အီတလီအုပ်စုနှင့်ဆွီဒင်လူမျိုးစုများမှအမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုများပြားသည်။ ”
... နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်စိတ်ဝင်စားမှုမေးခွန်းလွှာ (UOSIQ), တစ်ဦး သင့်ရာကို ကွဲပြားခြားနားသောပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ (ဇယား ၁) ကိုဖော်ပြသည့် ၂၂ ပုဒ်ပါသောအတိုင်းအတာသည်မြင်ကွင်းများစွာကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအဆင့်အတန်းများအားကြည့်ရှုခြင်းအပေါ်အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုသည်။
အဆိုပါဖြေဆိုသူသူတို့ UOSIQ အတွက်စာရင်း 22 အကြားကအင်တာနက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်ခဲ့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများကိုမေးမြန်းခဲ့ကြသည်။ ယေဘုယျအားသင်တန်းသားများကိုနမူနာ၏ 6.9% မှာအနည်းဆုံးသူတို့ထဲကတဦးတည်းနှင့် 6.7% ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်မြင်ကွင်းများအပေါငျးတို့သညျမွငျပါပွီမှကြေငြာနှင့်အတူ, (SD73.6) ကြည့်ရှုအားပေး 3.3 မြင်ကွင်းများပျမ်းမျှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တစ်ဦး hierarchical အလို့ငှာ, နိုင်ငံသားများနှင့်ကျား, မများကခွဲထားခဲ့သည်ကြည့်ရှုအားပေးသည့်မြင်ကွင်းများတစ်ဖော်ပြရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်စားပွဲတင်3ရှိုးများ, ။ Scatophilia, ဂိုဏ်းပေါက်ကွဲသံကြီး, spermatophagia နှင့်ရိုက်တာသင်တန်းသားများကိုထက်ဝက်ခန့်မြင်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, 40-50% အားဖြင့်ကျွန်ခံ, stuffing နှင့်တက်တူး; 30-40% အားဖြင့် exhibitionism, လက်သီးနှင့် fetishism; သင်တန်းသားများကို၏ထက်နည်း 30% အားဖြင့်အခြားမြင်ကွင်းများ။
ရလဒ်များကပြသည် မြင်ကွင်းများအလွန်နည်းပါးသင်တန်းသားများကိုမြင်ခြင်းနှင့်ပိုပြီးပုံမှန်မဟုတ်သော contents တွေကိုဝမ်းနည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အမြင့်ဆုံးရမှတ်ကိုထုတ်လုပ်နဲ့။ အများဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့ရသောမြင်ကွင်း ၁၀ ခုအကြား၊
အများဆုံးလိင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်မြင်ကွင်းများနီးပါးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော hierarchical အမိန့်နှင့်အတူသော်လည်း, အများဆုံးမြင်ကြမြင်ကွင်းများမှစာအဆက်အသွယ်။ Gangbang spermatophagia နှင့်ကျွန်ခံအီတလီအဘို့နှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများအဘို့ fetishism နှင့် exhibitionism အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, နှစ်ဦးစလုံးအီတလီနှင့်ဆွီဒင်ဖြေဆိုသူအဘို့, အရှိဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်တို့အားထင်ရှားလေ၏။ လက်သီး, အ 10 အများဆုံးမြင်ကြမြင်ကွင်းများအကြားဖြစ်ခြင်းပေမယ့်, အများဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တစ်ဦးထည့်သွင်းစဉ်းစားမခံခဲ့ရ
အုပ်စုနှစ်ခုကကြည့်ရှုသည့်ပုံမှန်မဟုတ်သောလိင်မြင်ကွင်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့်အခါအီတလီနှင့်ဆွီဒင်နိုင်ငံသားများအနေဖြင့်ပိုမိုကြည့်ရှုရန်ရွေးချယ်ထားသောအကြားကွဲပြားခြားနားသောကွဲပြားမှုများမတွေ့ရပါ။ သို့သော်အီတလီအုပ်စုသည်ပြဇာတ်ဝါဒ၊ gynemimetophilia၊ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဆွီဒင်အုပ်စုသည် gerontophilia, coprophilia နှင့် acrotomophilia တို့၏မြင်ကွင်းများကိုသိသိသာသာမြင်တွေ့ရန်ကြေငြာခဲ့သည်။ ” "သို့သော်ဤအမျိုးအစားများသည်စုစုပေါင်းမြင်ကွင်းများ၏သုံးပုံတစ်ပုံသာကိုကိုယ်စားပြုပြီးထို့အပြင်မြင်သာသောမြင်ကွင်းများအတွက်လည်းကွဲပြားခြားနားမှုမရှိချေ။ ထို့ကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုများအကျိုးစီးပွားကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးသည့်တစ်ခုတည်းသောအချက်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းသောသက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ ”
"ဒါဟာအစပေါ်ထွက်လာခဲ့သည် ထို အဆိုပါသုံးသပ်မြင်ကွင်းများ၏ထက်ဝက်ခန့် '' ပုံမှန်မဟုတ်သော '' ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများကိုကျော် 30% မြင်ကြသည်နှင့်ဤဆိုပါစို့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင် သူတို့ခေါ်ဆောင်သွားလူမှုရေးစိတ်ကူးယဉ်၏ဂန္ repertoire ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာကြပြီ။ အခြားမြင်ကွင်းများကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ အမှန်စင်စစ် romimetophilia, ginemimetophilia နှင့် Transsexualism များကို 'ကျား - မဆိုင်ရာ' အကျိုးစီးပွားများအဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။ ဤအတောအတွင်း necrophilia, gerontophilia, urophilia, zoophilia, sadism, coprophilia, incest, pedophilia နှင့် acromotophilia တို့သည်တရားမ ၀ င်သောရွေးချယ်မှုများဟုယူဆနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာရွံရှာဖွယ်ခံစားချက်များနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ "
မြင်တွေ့ရသောမြင်ကွင်းအရေအတွက်သည် ISST နှင့် SAST-A တို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်၊ ဒီအမျိုးမျိုးသောပုံမှန်မဟုတ်သော porno-ဂရပ်ဖစ်လှုံ့ဆော်မှုများကြည့်ရှုပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲနှင့်အတူထက် cybersexual ပြဿနာအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ညွှန်ပြနိုင်. သို့သော်ငြားလည်း, ပျှမ်းမျှ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဆင့်ကိုသိသိသာသာထင်ရှားအပြုသဘော ISST နှင့် SAST-တစ်ဦးကရမှတ်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်း။ ဒါဟာပုံမှန်မဟုတ်သောအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားပဲကြည့်ရှုသည်ထက် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးပိုမိုအသုံးဝင်ညွှန်ပြချက်နိုင်ပါတယ်ဘို့အမြင့်ဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားခံစားခဲ့ရပုံ။ "
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆင့်ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့်အင်တာနက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခံရဖို့ရှာတွေ့ခဲ့သည်နှင့်အမျှကျနော်တို့ထို့နောက်ကြောင်း hypothesize နိုင်ပါတယ် ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူအနည်းဆုံးနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော profile များကိုတည်ရှိ: တလက်ပေါ်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ repertoire မြှင့်တင်ရန်ကိရိယာတခုအဖြစ်အင်တာနက်အသုံးပြုတဲ့သူတွေကို; fixed ဦးစားပေးအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်သူတို့၏ '' ခက် '' အကျိုးစီးပွား, ရှာပိုပြီး compulsive လမ်းအတွက်အသုံးပြုရန်အဘယ်သူသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ထို။ ဤအဆိုအရပထမအုပ်စုသည်စူးစမ်းလိုစိတ်၊ မည်သည့်မြင်ကွင်းများကို၎င်းတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်သည်၊ မရှုပ်ထွေးစေလိုသည်၊ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ပျော်စရာပျော်စရာဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ထိုစိတ်ကူးယဉ်မှုများအားပုံမှန်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ခြင်းစသည်တို့ကိုလေ့လာရန်ဆန္ဒရှိသည်။ ဒုတိယအုပ်စုသည်အင်တာနက်ကိုလိင်စိတ်ကျေနပ်မှုအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုသည်။
“ အင်တာနက်လိင်မှုဆိုင်ရာကြိုတင်သုတေသနပြုချက်နှင့်အညီ (Cooper et al ။ , 2003; Daneback et al ။ , 2005; Grovet al, 2011) ။ ” ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကိုဖြစ်မတွေ့ရှိခဲ့သည် se နှုန်း ပုံမှန်မဟုတ်သောညစ်ညမ်း contents တွေကိုများ၏ကြည့်ရှုခန့်မှန်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောအချက်။ လိင်သည်အွန်လိုင်းမြင်မြင်ကွင်းများနှင့်၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှစ်ခုလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေးအကြီးဆုံးသောပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းတစ်ခုစီတိုင်းတွင်၊ မိန်းမများထက်ယောက်ျားများသည်အမြဲတမ်းအမြဲရှိသည်။ ၎င်းကိုအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်မြင်ဖူးပြီး၊
“ ကုထုံးပညာရှင်များသည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုရိုးရှင်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြု၍ လူတစ် ဦး နှင့်အမှန်တကယ်အွန်လိုင်းအတင်းအကျပ်ပြုမူသောအပြုအမူများကိုပြုလုပ်သောသူများအကြားခြားနားချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်အထက်ဆှေးနှေးခဲ့သကဲ့သို့, မြင်ကြညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများနှင့်ဝမ်းနည်းကြေစိတ်လှုပ်ရှားရဲ့ contents အဆိုပါ psychosexual အကြံပေးခြင်းအတွက်အာရုံစူးစိုက်ရန်အရေးကြီးပါသည်အကြောင်းအရာများဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ compulsive နှင့် / သို့မဟုတ် cybersexual ပြဿနာအပြုအမူများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေညွှန်းကိန်းအဖြစ်, တကယ်တော့, စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။"